In the age digital, nesimilo ezingaphezu kuka izindleko-uyoba umkhawulo elibusa abacwaningi. Lokho, esikhathini esizayo, sizobe abalwa kanzima ngaphansi nalokho kungenziwa nokuningi nalokho okufanele kwenziwe. Njengoba lokho kwenzeka, ngilindele ukuthi indlela imithetho-based ososayensi bezenhlalo kanye ad-hoc kusondela ososayensi idatha zizovela bubheke into efana izimiso ezisekelwe wasondela echazwe kuSahluko 6. Nami alindele ukuthi imithetho yokuziphatha iba ucwaningo esicace kakhulu umkhawulo, kuyoba seliyinto yocwaningo uqobo. Ngendlela efanayo ukuthi abacwaningi social manje bazinika isikhathi namandla asathuthuka izindlela ezintsha ezenza tilinganiso eshibhile futhi kunembile more, ngilindele ukuthi siyakuphila futhi sisebenze ukuthuthukisa izindlela ukuthi maningi ngobulungiswa wemfanelo. Lolu shintsho ngeke kwenzeke hhayi nje ngoba abacwaningi ukunakekela mayelana nendlela yokuziphatha njengoba kuphele, kodwa futhi ngoba abacwaningi ukunakekela mayelana nendlela yokuziphatha njengendlela ucwaningo social.
Isibonelo salokhu mkhuba ucwaningo ubumfihlo umehluko (Dwork 2008) . Ake sithi, amarekhodi ezempilo isibonelo, esibhedlela uye kunikelwe nabacwaningi ufuna ukuqonda amaphethini idatha. Differentially ubuchule yangasese ukuze abantu bakwazi ukhononda amarekhodi ezempilo ukuze ufunde mayelana amaphethini sesisonke (sib, abantu ababhemayo cishe ababi nomdlavuza) ngenkathi ukunciphisa ingozi yokufunda lutho mayelana nezici kwanoma ethile. Ukuthuthukisa lezi uhlobo ubuchule ubumfihlo-ukulondwa isibe endaweni asebenzayo yocwaningo; bheka Dwork and Roth (2014) ukuze uthole ukwelashwa incwadi-ubude. ubumfihlo Ukwahlukaniswa uyisibonelo umphakathi ucwaningo kuthatha inselele zesimilo, turning kube wocwaningo, bese uthuthuka kuso. Lena isibonelo Ngicabanga ukuthi bazowubona sibone kwezinye izindawo ucwaningo social.
Njengoba amandla abacwaningi, ngokuvamile ngokubambisana nezinkampani kanye nohulumeni, liyaqhubeka landa, liyoba nzima ukugwema izimpikiswano ngokuphathelene nezimiso zokuziphatha eziyinkimbinkimbi. Kuye kwaba okuhlangenwe nakho kwami ​​ukuthi ososayensi abaningi social nososayensi idatha ukubuka lezi izimpikiswano ngokuphathelene nezimiso zokuziphatha njengoba ixhaphozi okufanele sikugweme. Kodwa, ngicabanga ukuthi ukugwema lawo makhemikhali ngeke abe ngokuya untenable njengeqhinga lokuphumelelisa. Thina, njengoba umphakathi, kungaba kuphela kusingathwe lezi zinkinga uma senza angenele okuzisingatha ne ubuqambi ukuzikhandla sisebenzisa kwezinye izinkinga ucwaningo.